Beach soccer – «Can 2018»: resin’ny Barea ny Elefantan’i Côte d’Ivoire | NewsMada
Beach soccer – «Can 2018»: resin’ny Barea ny Elefantan’i Côte d’Ivoire
Tsara fanombohana ny Barea de Madagascar, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2018”, beach soccer. Fandresena avy hatrany mantsy ny azon-dry zalahy nanoloana ny Elefantan’i Côte d’Ivoire.
Nisantatra fandresena ny Barea de Madagascar, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2018”, baolina kitra lalaovina amin’ny torapasika “beach soccer”. Fifaninanana, tanterahina ao amin’ny Charm el-Cheikh, ao Egypta.
Resin’i Madagasikara, tamin’ny isa tery 4 no ho 3, teo amin’ny lalao voalohany, ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, teo amin’ny andro voalohany notanterahina, omaly alahady. Niady hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany ny fihaonan’ny roa tonta. Nifandimbiasana ny nitarika ny isa tao anatin’ireo 12 mn intelo miditra. Nanahirana ny Ivoarianina ny traikefa sy ny hakingana eo amin-dry Tiana (Tsiliva) sy ry Juliot ary i Angeluc.
Hifandona amin’ny Faraonan’i Egyta ny Barea, anio, eo amin’ny andro faharoa. Ry zareo Egyptianina izay nandavo an’i Maraoka, tamin’ny isa mavesatra 6 no ho 1, ho an’ity sokajy “A” ity.
Nivoaka sempotra kosa ny Lionan’i Teranga avy any Sénégal, tompondakan’i Afrika farany, vao nivoaka nandresy nanoloana ny Voromaherin’i Nizeria, ho an’ny vondrona “B”. Efa tany amin’ny fandakana ny “tirs au but”, 2 no ho 1, mantsy vao tafavoaka izy ireo. Nisaraka tamin’ny isa 4 no ho 4 ny roa tonta, tao anatin’ny fe-potoana ara-dalàna sy ny fanalavam-potoana.
Ho an’ny lalao ilany, ho an’ity sokajy ity ihany, lavon’i Lybia, tamin’ny isa mazava 5 no ho 2, i Tanzania.